Dɛn ne Buronya Ho Nokwasɛm? | A & M
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zande Zulu
Sɛ wokɔ wiase baabiara a, nnipa pii di Buronya. Nea enti a ebinom di ne sɛ, ɛma wɔnya kwan ne wɔn nnamfo ne wɔn mmusua bom gye wɔn ani. Ebinom nso wɔ hɔ a, saa bere no, wɔnya bere susu Onyankopɔn ho na wɔboa ahiafoɔ. Ɛnyɛ bɔne sɛ obi bɛyɛ saa nneɛma yi nyinaa bi. Nanso, nneɛma bi wɔ Buronya ho a ɛntwa yie.
Nea ɛdi kan ne sɛ, wɔn a wɔdi Buronya no mu pii adwene yɛ wɔn sɛ ɛyɛ Yesu awoda. Nanso, abakɔsɛm atwerɛfoɔ gye tom sɛ obiara nnim da a wɔwoo Yesu. Nhoma bi ka sɛ “tete Kristofoɔ no amfa da pɔtee bi ansi hɔ sɛ Yesu awoda” efisɛ na wɔpɛ sɛ “wɔtwe wɔn ho fi abosonsom biara ho.” (The Christian Book of Why) Bible nso nka biribiara a ɛkyerɛ sɛ Yesu ankasa dii n’awoda anaasɛ ɔdii obi awoda. Mmom no, nea ɔka kyerɛɛ n’akyidifoɔ ne sɛ wɔnkae ne wuo.—Luka 22:19.
Nea ɛtɔ so mmienu ne sɛ, nhomanimfoɔ bebree gye tom sɛ nneɛma a ɛkɔ so Buronya bere no, ɛmu dodoɔ no ara fi abosonsom mu. Ebi ne Papa Buronya. Foforɔ nso ne mmatannua a wɔde siesie fie, Buronya dua, akyɛdeɛ a wɔde ma nkurɔfoɔ, kyɛnere a wɔsosɔ, Buronya nnyina a wɔhye, nhwiren a wɔkyekyere de sensɛn hɔ, ne Buronya nnwom a wɔto. Nhoma bi ka saa nneɛma yi ho asɛm sɛ: “Buronya du na sɛ obi kyɛ yɛn adeɛ anaa yɛkyɛ obi adeɛ na yɛde nhwiren sensɛn yɛn fie ne asɔredan mu a, yɛn mu dodoɔ sɛn na ɛba yɛn adwene mu sɛ ebia ɛyɛ abosonsom?”—The Externals of the Catholic Church.
“Buronya du na sɛ obi kyɛ yɛn adeɛ anaa yɛkyɛ obi adeɛ na yɛde nhwiren sensɛn yɛn fie ne asɔredan mu a, yɛn mu dodoɔ sɛn na ɛba yɛn adwene mu sɛ ebia ɛyɛ abosonsom?”—The Externals of the Catholic Church
Wo fam deɛ, ebia worenhu mfomsoɔ biara wɔ saa nneɛma yi ho. Sɛ saa a, ɛnneɛ susu wei ho hwɛ. Onyankopɔn mpɛ sɛ yɛde abosonsom bɛfrafra nokware som. Yehowa Nyankopɔn nam ne diyifoɔ Amos so ka kyerɛɛ tete Israelfoɔ a na wɔamane afi nokware som ho no sɛ: “Metan mo afahyɛ ahodoɔ no na mapo koraa . . . Monyi mo dwom gyegyeegye no mfiri me so.”—Amos 5:21, 23.
Adɛn nti na Yehowa kaa saa? Nnipa a wɔwɔ tete Israel ahemman a ɛwɔ atifi fam no nneyɛɛ ntia. Yeroboam ne wɔn hene a ɔdi kan, na ɔyɛɛ sika anantwie mma sisii kuro mmienu mu. Ɔde baako sii Dan, ɛnna ɔde baako sii Betel. Yeroboam hyɛɛ ne manfoɔ no nkuran sɛ wɔnsom saa ahoni no mmom sen sɛ wɔbɛtwa kwan akɔ Yerusalem akɔsom Yehowa Nyankopɔn. Ɔsan hyɛɛ fã maa ne manfoɔ na ɔyiyii asɔfoɔ a wɔbɛdi nkurɔfoɔ no anim ama wɔadi saa afahyɛ no.—1 Ahemfo 12:26-33.
Nea Israelfoɔ no yɛeɛ no, wohwɛ a wobɛka sɛ asɛm biara nni ho. Nneɛma a wɔyɛe nyinaa, adwene a na ɛwɔ akyi ne sɛ wɔpɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn na wɔsɔ n’ani. Nanso, sɛ yɛhwɛ nsɛm a anibere wom a Onyankopɔn nam Amos ne adiyifoɔ foforɔ so ka kyerɛɛ Israelfoɔ no a, ɛma yɛhu sɛ na Onyankopɔn ne wɔn nyɛ adwene. Onyankopɔn nam odiyifoɔ Malaki so kaa sɛ: “Mene Yehowa; mensakraeɛ.” (Malaki 3:6) Sɛ saa a, Buronya a nkurɔfoɔ di no nnɛ no nso ɛ? Wohwɛ a, Onyankopɔn bu no sɛn?
Nea yɛaka yi nyinaa nti, nnipa mpempem pii nni Buronya. Mmom no, wɔne wɔn nnamfo ne wɔn mmusua tumi gye wɔn ani bere biara a wɔpɛ. Sɛ wɔnya hokwan nso a, wɔboa ahiafoɔ a wɔntwɛn bere pɔtee bi ansa.